Iyo Agile Kushambadzira Rwendo | Martech Zone
Nemakore gumi ekubatsira makambani kukura mabhizinesi avo online, isu takasimbisa maitiro anoona kubudirira. Kazhinji kazhinji kwete, isu tinoona kuti makambani anorwira nekutengesa kwavo kwedhijitari nekuti ivo vanoedza kusvetukira zvakananga mukuitwa pane kutora matanho anodiwa.
Dhijitari Kushambadzira Shanduko
Shanduko yekutengesa inofanana neshanduko yedhijitari. MuChidzidzo cheData kubva kuPointSource - Kuitisa Shanduko Dhijitari - dhata rakaunganidzwa kubva kune vanoita zvisarudzo mazana matatu muKushambadzira, IT, uye Mashandiro anonongedzera kumatambudziko ane mabhizinesi mukuvandudza nemushandisi-wekupedzisira mupfungwa. Vakaona kuti makambani:
Kushaya zvinotsanangurwa zvakajeka zvinangwa uye gwara - 44% chete yemabhizinesi anoti vane chivimbo chakanyanya mukugona kwesangano ravo kuzadzisa chiono chekukura uye 4% havana chivimbo zvachose.
Kurwira kubatanidza muchinjika-chiteshi dhijitari zviitiko - chete 51% emabhizinesi anoti sangano ravo rinotarisana nezvinodiwa nevashandisi pamapuratifomu ese
Iva nepfungwa dzenhaka dzinogadzira zvipingamupinyi pakushanduka kwedhijitari - 76% emabhizinesi anoti dhipatimendi ravo rinokwikwidza nemamwe madhipatimendi musangano ravo kuwana zviwanikwa uye / kana bhajeti.
Shanda pane echinyakare masisitimu ayo anotadzisa iko kugona kugadzirisa dhijitari zviitiko - 84% vanoti sangano ravo rakaparadzanisa masisitimu enhaka anokanganisa kumhanyisa kwekuvandudza kwezviitiko zvitsva zvemadhijitari
Uku ndiko kutyisidzira kusangano rako sezvaunotarisira kushandura kushambadzira kwako kwedhijitari. Tine mutengesi mukuru mudunhu raida rubatsiro nekutengesa kwavo kwedhijitari. Isu takaona mukana unoshamisa wekuti vashandise itsva ecommerce system yaive yakabatanidzwa kune yavo nzvimbo yekutengesa. Nekudaro, hutungamiriri hwakatsika mari pamubhadharo wekuvaka hesera yezvivakwa uye poindi yekutengesa system iyo yakanga yavatorera makumi emamirioni emadhora mumakore apfuura. Ivo vakati chero kudyara mune nyowani poindi yekutengesa, hesheni, uye kuzadzikisa hurongwa zvaive kunze kwehurukuro.
Mhedzisiro yacho ndeyekuti paigona kuve pasina kuyananisa kana kusangana pakati pekutengesa kwepamhepo nekunze. Isu takafamba kubva pane iyi tarisiro mushure memisangano yakati wandei inovimbisa - pakanga pasina kana nzira yataikwanisa kuwana mhedzisiro yekukura yavaishuvira kupa kwavo kwakanyanya masisitimu. Ndine kusahadzika kushoma kuti ichi chaive chinhu chakakura mukurwa kwavo - uye ivo zvino vakamhan'arira kubhuroka mushure mekuona bhizinesi ravo richiderera pamusoro pemakore.
Agile Kushambadzira Rwendo
Kana bhizinesi rako richitarisira kugadzirisa nekukunda aya matambudziko, iwe unofanirwa kutora iyo kushambadzira kwekushambadzira maitiro. Iyi haisi nhau, isu tanga tichigovana agile kushambadzira nzira kwemakore mashoma ikozvino. Asi sezvo gore roga roga richipfuura, kukanganisa kwekushanduka kwekushambadzira kunoenderera kuchikanganisa mabhizinesi zvakanyanya. Hazvizotora nguva refu bhizinesi rako risati rave nebasa.
Key Performance Indicators wedzera kune bhizinesi redhijitari, kusanganisira kuzivisa, kubatanidzwa, masimba, kutendeuka, kuchengetedza, kusimudzira, uye ruzivo. Mune yedu yazvino infographic, isu takaratidzira rwendo rwatinotora vatengi vedu kuburikidza kuti tione kubudirira kwavo. Iwo matanho eedu Agile Kushambadzira Rwendo Sanganisira:
Ramba uchifunga kuti urwu ndirwo rwendo rwakazara, kwete gwara rekushandisa kuita uye kuita kushambadzira kwekushambadzira mazano. Imwe tsime rakanyatsotsanangurwa ConversionXL's Maitiro ekushandisa sei Scum yeAgile Kushambadzira.
Isu tanga tichida kuenzanisira hukama pakati pezvikamu zvepakati cherwendo rwako uye izvo zvinhu zvinofanirwa kuongororwa sezvo iwe uchifamba kuburikidza neye cosmos yekushambadzira kwedhijitari. Ndinovimba unonakirwa neiyi infographic zvakanyanya sekufara kwatakaita nekuishandisa pairi mwedzi wapfuura! Ndiyo hwaro hweumwe neumwe wedu wekuita nevatengi.
Ini ndakagadzirawo Yekushambadzira Initiative Worksheet kuti ikubatsire kuronga kwako kushambadzira kuedza uye kuve nechokwadi chekuenderana pamwe neako akazara makambani zvinangwa.
Dhawunirodha Kushambadzira Initative Worksheet
Ive neshuwa yekudzvanya izere vhezheni kana iwe uchinetseka kuiverenga!
Tags: kushambadzira kwekushambadziraagile kushambadzira rwendoagile kushambadzira modhiagile kushambadzira maitirosimbakuzivakupindukashanduko yedhijitarikuwanikidzaKubatanakuurayiwaruzivokushandarwendokushambadzira methologywokushambadza womuenzanisomhandooptimizationurongwakuchengetwanzirakushandurwaupsell